Gịnị bụ profaịlụ ndị ahịa? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe profaịlụ nke onye na-azụ?
Nkọwapụta ndị ahịa Ọ na-anọchite anya ihe dị mkpa mgbe ụlọ ọrụ chọrọ ozi gbasara ọnọdụ na usoro ọrụ, yana ọrụ nke nzukọ ahụ.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na asọmpi azụmahịa, nwee profaịlụ ndị ahịa Na nchekwa data gị ọ nwere ike ịnye gị ozi gbasara nke ndị ahịa kachasị baa uru dabere na oke ngwaahịa na ọnụ ahịa ndị ahịa.
N'otu aka ahụ, ndị a profaịlụ ahia Ha ga-enye gị ohere ịmara ebe ndị ahịa ahụ nọ ugbu a, ndị bụkwa ndị kacha baa uru na ọnwa gara aga ma ọ bụ afọ gara aga. Ọbụghị naanị nke ahụ, profaịlụ ndị na - azụ ahịa nwere ike ịgwa gị ngwaahịa ndị na - ere nke ọma na ndị na - eweta obere ahịa.
I nwekwara ike mara nke ngwaahịa mkpa ka reinvented na nke ọhụrụ ngwaahịa nwere ike ewepụtara iji mejuo ahịa mmasị n'etiti a ụfọdụ afọ ole. Ijide na iji profaịlụ ndị na-azụ ahịa dịkwa na mmemme weebụ, ọkachasị n'ahịa kọmputa.
N'ezie, ọtụtụ peeji na ị nwere n'ịntanetị, ha na-eguzobe nchekwa data nwere onwe maka ọrụ naanị ya. Ojiji nke profaịlụ ndị ahịa maka saịtị Ecommerce Ọ nwere ike ịbụ ọrụ mgbagwoju anya, tumadi n'ihi na ndị mmadụ anaghị ejedebe naanị n'otu weebụsaịtị. Ya mere, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ga-agba mbọ hụ na ha kwadoro ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị.
Ọ dịkwa mkpa ịtụle nke ahụ profaịlụ ahia Ha na-agbanwe mgbe niile, enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara na ihe ndị a na-ada na data. O nwere ike ịbụ na onye na-azụ ahịa dị anya na saịtị ahụ ma ọ bụ na ihe ha họọrọ agbanweela.
Imirikiti ụlọ nkwakọba ihe data maka saịtị ecommerce, nwere injin na-ahụ omume omume na saịtị ahụ. Igwe ndị a nwere ikike ịzụrụ ịzụrụ, ndebanye aha, nyocha ngwaahịa, yana ihe ọ bụla ọzọ enwere ike ịnweta ozi. Ya mere, enwere ike imelite profaịlụ nke ndị ahịa mgbe niile.
Kedu ndị bụ ndị ahịa anyị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ihe profaịlụ nke onye na-azụ?
Ihe ị kwesịrị ịlele maka Ecommerce gị iji nwee ihe ịga nke ọma
DHL jiri FarEye na-ebuli azụmahịa ya nke lọjistik